Qoraalka Qodobbada Qodobka Wiki - Jawaab celinta
Wikipedia waa barta ugu muhiimsan ee bixisa adeeg bilaash ah oo ku saabsan macluumaadka tayo sare leh ee dhammaan noocyada kala duwan ee isticmaalayaasha adduunka oo dhan. Wiki waxay daboolaysaa mawduucyo kala duwan iyo fikradaha siyaasadeed. Dhawaan, wariyeyaasha Wiki iyo tabarrucayaal ayaa ku soo booday fara badan oo ku saabsan ka-tiritaanka maqaal sadex-dheer oo ku yaal bogga Wikipedia
Julia Vashneva, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa sheegay in maqaal ku saabsan borotiinka dhiigga "Hemovanadin" uu ahaa mowduuc ka hadlaya kadib markii qaar ka mid ah tafaftirayaashu ay billaabeen mooshin ay kaga doodayaan maqaalkii Wikipedia. Sida laga soo xigtay Andrea James, maqaalkan ayaa si kastaba ha ahaatee lagu soo celiyay website-ka. "Hemovanadin" waa maqaal cilmiyaysan oo si wanaagsan loo ilaaliyo oo ahmiyad weyn u leh culimada iyo ardayda.
Andrea James waxa uu soo xigtay in "haawannadin" maqaalkeedu uu yahay wajiga xad dhaafka ah ee Wiki loo yaqaan "deletionism - интеренет магазин алло мебель." In la tirtiro macluumaad qiimo leh oo ka yimid Wikipedia waa khatar weyn oo ku wajahan qaybta waxbarashada ee isticmaala Wiki sida ilaha ugu muhiimsan ee tixraaca. Wixii ka badan 14 sanadood, Wikipedia ayaa bixiyay macluumaad wanaagsan oo ku saabsan macaamiisha booqanaya goobta maalin kasta si ay u bartaan aqoonta
Fahamka sida Wikipedia u shaqeeyo
Deletionism waa fikrad adag oo kaliya oo la fahmi karo iyada oo la raacayo iyo raacitaanka qaabka sida Wiki u shaqeeyo. Wikipedia waxaa maamula bulsho ka kooban mutadawiciin iyo tifaftirayaal kuwaas oo dejiya siyaasado iyo tilmaamo ku saabsan isticmaalka Wikipedia. Tifatirayaashu waxay abuureen oo ay wax ka beddelaan maqaayada cilmiga leh ee laga heli karo Wiki.
Wikipedia waxaa loola jeeda iyadoo tabaruceyaashu ay fahmaan siyaasaddiisa iyo tilmaamaheeda. Hase yeeshee, mutadawiciin kala duwan ayaa u fasiraya siyaasadaha si kala duwan, xaalad dhacdo taas oo horseedi karta tirtiris. Tifaftireyaasha ayaa shaqeeya oo u gooni ah oo shaqeeya oo ka shaqeynaya wanaaga goobta. Si kastaba ha noqotee, bani'aadamku waxay sameeyaan khaladaadka, sidaas oo kale Wikipedians.
Hemovanadin waa tusaale ka mid ah maqaal ah oo lagu daray Wikipedia oo kaliya in la horumariyo lana daaho. Si kastaba ha noqotee, heerarka ogeysiinta waa in la dejiyaa si loo xakameeyo soo gudbinta alaabta aqooneed ee aan ku guulaysan in ay gaaraan heerarka. Tirtiridda qalabka wax lagu duubo ayaa aad u raaxo badan marka la barbar dhigo abuurida maqaal cusub. Xayiraadda qoraallada dabiiciga ah ee ay sameeyeen tifaftirayaasha cusub waxay noqon karaan qaar waxoogaa niyadjab ah, gaar ahaan marka la tirtiro bakhtiinta, tifaftirayaashuna ma helayaan sharraxaad ah sababta ay ashyaada looga saaray Wiki.
Noocyada ugu fiican ee maqaallada dabiiciga ah waxay ku xiran yihiin tabaruc yar. Samaynta edbiyo badan oo qayb gaar ah ayaa isbedelaya asalka asalka ah ee qoraalka. Waqtigaan, tifaftireyaasha waxay sameysteen lacago maskaxda ku haysa in sababtoo ah maqaal uu leeyahay ilo sax ah, ma buuxiyo heerarka ogeysiinta. Halkan waxaa ku qoran faahfaahin kusaabsan sida qoraallada saxda ah loo diyaarin karo si looga fogaado tirtiridda.
Qaybaha xayiraadda saxda ah waxay ku xiran tahay mowduucyada
Hagaajinta iyo xasuusinta maqaallada saxda ah ee ballaadhinta
Soo bandhigida midabyo kala duwan si ay u calaamadeeyaan xidhiidhada keenaya maqaallada dabaqada
Asal ahaan, ku darida macluumaadka faa'iido leh ee maqaallada qoraalka ayaa aad uga fiican marka laga reebo dhammaan qodobka Wiki. Qaabka qodobbada ayaa sidoo kale muhiim ah. Qoraalada saxda ah ee aan u dhigmin qaabka alaabada nuxuusiga ah waxay halis ugu jiraan inay ka hor tagaan.